Guddiga baaritaan oo ka socda Dowladda oo maanta ku wajahan Baladweyne – War La Helaa Talo La Helaa
Guddiga baaritaan oo ka socda Dowladda oo maanta ku wajahan Baladweyne
By Xuseen Madoobe	 On Jun 13, 2019
Madaxweynaha Soomaaliya ayaa shalay waxaa uu guddi baaritaano sameeya u saaray dagaalkii ka dhacay deegaanka Kalabeyr e lagu dilay taliyihii qeybta booliska Gobolka Hiiraan,waxaana Maanta ay tegayaan Magaalada Baladweyne.
Guddiga oo uu guddoomiye u yahay Taliyaha Ciidanka Asluubta Soomaaliyeed Bashiir Maxamed Jaamac ayaa waxaa qeyb ka ah Xeer ilaalinta Maxkamada Cidiamada Qalabka sida ee Soomaaliya.
Waxaa ay guddigaas baaritaan dhab ah la filayaa inay kusoo sameeyaan sababtii ka dambeysay dilka taliyihii qeybta booliska Gobolka Hiiraan Col, Maxamed Macow Xalane oo ku dhintay dagaalkii deegaanka Kalabeyr.
Taliyaha Ciidanka Asluubta Soomaaliyeed ahna gudoomiyaha guddigaas ayaa shalay isaga oo Saxaafadda kula hadlayay Muqdisho sheegay in guddigooda uu si wanaagsan baaritaano ugu sameyn doono wixii ka dhacay deegaanka Kalabeyr ee lagu dilay Taliye Macow.
Madaxweynaha Maamulka Hir-Shabeelle Maxamed Cabdi Waare oo ku sugan Baladweyne ayaa soo dhaweeyay guddigaas,waxaana uu sheegay in guddi kale oo la Shaqeeya uu Magacaabi doono si baaritaan ay u wada sameeyaan.
Xiisadii ka dhalatay xilka qaadistiui Guddoomiyihii gobolka Hiiraan Yuusuf Axmed Hagar (Dabageed) ayaa weli ka taagan Baladweyne, iyada oo shalay banaanbax looga soo horjeedo Maamulka Hir-Shabeelle uu ka dhacay Baladweyne.
SAWIRRO: RW Kheyre oo xalay kormeeray goobo muhiim ah
Al-Shabaab oo weerar Qaraxyo ah ka geystay gudaha dalka Kenya